Ikhekhe eliphuzi nendlelakwenza yalo ekhethekile - Bayede News
Home » Ikhekhe eliphuzi nendlelakwenza yalo ekhethekile
Cishe wonke umbhaki uzokutshela ukuthi ikhekhe eliphuzi linguhlobo lwekhekhe oIukhetheke kangakanani ngenxa yobuciko obudingeka ekulenzeni. Kulula ukushintsha indlelakwenza emakhekheni amaningi, kodwa angeke ngakuncoma uma wenza lolu hlobo lwekhekhe.
Ukungalandeli indlelakwenza yaleli khekhe kuvamise ukushintsha indlela elinambitheka ngayo kanye nokubukeka kwalo. Uma usukwazi ukwenza leli khekhe uyobe usungumbhaki wekhethelo ngempela, ngakho ngiyakugqugquzela ukuthi ulizame.
Leli khekhe libizwa ngekhekhe eliphuzi ngenxa yombala walo ophuzi nokwenza lehluke indlela elibukeka ngayo kulelo leVanilla elejwayelekile. Lo mehluko ulethwa indlela okuthakwa ngayo amaqanda kuleli khekhe nengicabanga ukuthi iyona ndlela ebaluleke kunazo zonke kundlelakwenza yaleli khekhe. Ngakho ungalingeki ukuthi ungayilandeli njengoba injalo le ndlelakwenza. Uma ubona ngathi kukhona ukudideka, ungithinte nge-imeyli ukuze ngikucathulise. Kuyisifiso sami ukuthi ulenze leli khekhe futhi liphume ngendlela.
Izinkomishi ezimbili nekota (2¼) zikaflawa wamakhekhe
Ikota (1/4) yeBicarbonate of Soda
Ingxenye (1/2) yethispuni kasawoti
Ama-230g ebhotela elithanjisiwe
Inkomishi eyodwa namakota amathathu (1¾) kashukela omhlophe
Amaqanda amakhulu amabili (2) kanye nezikhupha (ingxenye ephuzi yeqanda) zamaqanda amabili (2), angaphumi efrijini. Phahlaza amaqanda, uzibeke ngokuhlukana izikhupha ezine, bese nengxenye emhlophe ibe yodwa (kubalulekile kakhulu lokhu).
Amathispuni amabili (2) eVanilla Essence
Inkomishi eyodwa (1) yeButtermilk
I-1/8 wethispuni yeCream of Tartar
Ama-290g webhotela elithanjisiwe
Izinkomishi ezithathu nengxenye (3½) zikashukela osampuphu
Ama-65g eCocoa Powder engenawo ushukela
Izipuni zokudla ezine (4) zikakhilimu (noma ubisi uma ungenawo ukhilimu), ongaphumi efrijini
Ikota (1/4) yethispuni likasawoti
Shisisa uhhavini ngokuwubeka ku-177°C bese ulungisa amapani okubhaka ayizindilinga amabili ngokuwafafaza ngeNon-Stick Spray noma ufake iphepha lokubhaka.
Endishini enkulu, sefa uflawa, ufake iBaking Powder, iBicarbonate of Soda kanye nosawoti. Hlanganisa ngewhisk ngokuphelele.
Kwenye indishi, faka ushukela nebhotela bese uhlanganisa ngomshini kagesi ngesivinini esiphezulu imizuzu ecishe ibe mithathu.
Yehlisa isivinini somshini sibe maphakathi nendawo, bese ufaka zozine izikhupha zamaqanda, ngasinye (kubalulekile lokhu, ungazifaki zonke kanye kanye). Qinisekisa ukuthi isikhupha ngasinye sishayeka ngokuphelele ngaphambi kokufaka esinye. Ungalokothi ufake ingxenye emhlophe yeqanda okwamanje
Qulela iVanilla Essence uqhubeke uhlanganise ngomshini. Beka eceleni.
Kwenye indishi, faka ingxenye yezithako ezomile uzihlanganise nengxenye yeButtermilk, bese uhlanganisa ngomshini ngesivinini esiphansi, kuhlangane ngokuphelele.
Qulela le ngxenye esele yezithako ezomile kanye neButtermilk esele, uqhubeke uhlanganise ngomshini.
Uzoqaphela ukuthi inhlama yakho yomile. Kungakukhathazi lokhu.
Ungadinga ukusebenzisa ukhezo olukhulu ukuqhubeka uhlanganise inhlama yakho, ukuqinisekisa ukuthi azikho izigaxa ezigqibeke ngaphansi.
Khumbula ukuthi awukayisebenzisi ingxenye emhlophe yamaqanda.
Endishini encane, faka ingxenye emhlophe yamaqanda uyihlanganise neCream of Tartar ngomshini kagesi, ngesivinini esiphezulu. Hlanganisa imizuzu ecishe ibe mithathu, ingxube ize ibukeke njengengwebu (isithombe esingenhla sikhombisa ukuthi kufanele ibukeke kanjani).
Faka le ngwebu enhlameni yakho, bese uhlanganisa ngokhezo. Qikelela ukuthi ungahlanganisi ngokweqile.
Faka inhlama yakho emapanini aselungiselwe ukubhaka.
Faka amapani akho kuhhavini ubhake imizuzu ephakathi kwengamashumi amabili nesikhombisa (27) nengamashumi amathathu (30).
Ukuhlola ukuthi ikhekhe lakho selivuthiwe, shutheka uthi lokuvungula phakathi nendawo yekhekhe. Uma luphuma luhlanzekile, kuyobe kusho ukuthi selivuthiwe.
Khipha ikhekhe kuhhavini, ulibeke ngaphandle ukuze liphole.
Kufanele liphole ngokuphelele ikhekhe ngaphambi kokuthi lifakwe iFrosting.
Endishini, faka ibhotela bese ulishaya ngomshini kagesi cishe imizuzu emibili, lize libe sakhilimu.
Faka ushukela osampuphu, i-Cocoa Powder, ukhilimu, usawoti kanye neVanilla Essence.
Qhubeka uhlanganise ngomshini, ngesivinini esiphansi imizuzwana engamashumi amathathu.
Khuphula isivinini somshini usibeke phezulu, uqhubeke uhlanganise umzuzu owodwa.
Uma ubona ukuthi ingxube yakho imanzi, ungathela isipuni esisodwa seCocoa Powder. Uma ufuna ukuyithambisa, thela isipuni sokudla sikakhilimu noma ubisi.
Ngokusebenzisa ummese wesinkwa, sika ingaphezulu la makhekhe womabili (bheka isithombe esingenhla).
Beka ikhekhe elilodwa phezu kweStand sekhekhe.
Ninda iFrosting phezulu, uqiniseke ukuthi iyaligqiba lonke ingaphezulu lekhekhe.
Beka elinye ikhekhe phezulu (le ngxenye esikiwe kube yiyona ehlangana neFrosting), bese weleka ngeFrosting encane phezulu (qiniseka ukuthi iyasala eningi i-frosting)
Faka ikhekhe lakho efrijini (imizuzu eyishumi nanhlanu) ukuze iFrosting yakho inamathele kahle ekhekheni.
Khipha ikhekhe efrijini bese unameka iFrosting esele phezulu, kanjalo nasemacaleni ekhekhe lakho.
Vuvuzela noma ubeke lokho ozohlobisa ikhekhe lakho ngakho phezulu.
Ukuze lisikeke ngobunono ikhekhe lakho uma selidliwa, libeke efrijini imizuzu engamashumi amathathu, bese ulikhipha kusasele cishe eminye engamashumi amathathu ngaphambi kokuthi lidliwe.
Uma zifakwe esitsheni esivaleka ngci, izinsalela zaleli khekhe zingahlala usuku olulodwa ngaphandle kanti efrijini zingahlala izinsuku ezinhlanu.
Ngenxa yokuthi lineFrosting lelikhekhe, angeke ukwazi ukuligcina kufriza ngakho kuzofanele lidliwe liphele.
Ngingajabula ukuzwa ukuthi ihambe kanjani imizamo yakho yokubhaka leli khekhe.
Ungangithumela i-imeyli ku szungu@nkzgroup.co.za